Soosaarka waalka balanbaalis Triple eccentric
Mashiinka seddex-geesoodka ah ee loo yaqaan 'balanbaalis balanbaalis', oo sidoo kale loo yaqaan 'valve offset butterfly valve', ayaa ah nooc ka mid ah waxsoosaarka balastarrada waxqabadka sare leh, oo loogu talagalay xaaladaha shaqada ee cadaadiska sare, heerkulka sare, iyo mowjadaha sare ee furan iyo kuwa dhow. Cinjirka balaastigga ah ee xargaha gogosha leh, oo leh naqshad bisil iyo ma ...
Imtixaanka waalka balanbaalis iyo qaababka xalinta dhibaatada
Imtixaanka balanbaalis balanbaalis iyo hagaajinta: 1. Balanbalada balanbaalisku waa buug gacmeed, pneumatic, haydarooliga, iyo qayb koronto si adag u jajabisay ka hor intaanu ka bixin warshada. Markaad dib u eegayso waxqabadka shaabadaynta, isticmaaluhu waa inuu si siman u hagaajiyaa labada dhinac ee laga soo galo iyo meesha laga baxo, xir b ...
Mabda'a shaqada ee biraha seddexaad ee birta ah ee adag ee baaldiga balanbaalis: Qalabka saddexlaabka birta ah ee daboolaya balanbaalisyada, marka lagu daro labada eccentricity ee qalabka waalka iyo saxanka waalka, dusha sare ee saxanka waalka iyo kursiga waalka ayaa ku yaal qaab ubax ...
Gawaarida Globe ee shaqeynaya, dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha waalka waa inay ahaadaan kuwo dhameystiran oo aan hagaagsaneyn. Handarraabbadeedii oo ku saabsan flange iyo qaybta waa lagama maarmaan. Mawduucu waa inuu ahaadaa mid aan la oggolaanayn in la furfuro. Ku dheji lowska gacmaha, haddii la helo dabacsan waa in lagu adkeeya waqtiga, si aan loo xirmin isku xirnaanta ama l ...
(1) qaabdhismeedka waalka dunidu wuu ka fududyahay waalka albaabka, soosaarka iyo dayactirkuna way ku habboon yihiin. (2) dusha sare ee wax lagu xiro ma sahlana in la xidho oo la xoqmo, xirashada wanaagsan, furitaanka iyo isku xidhka inta udhaxeysa qalabka wax lagu xiro iyo dusha sare ee maqaarka jirka oo aan lahayn qaraabo, ...
Isbarbardhigga faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka korontada ku shaqeeya iyo kuwa pneumatic,
Waalka korontada Dhaqdhaqaaqa korantada korantada waxaa badanaa loo isticmaalaa dhirta korantada ama dhirta tamarta nukliyeerka, maxaa yeelay nidaamka biyaha cadaadiska sare wuxuu u baahan yahay hanaan deggan, deggan oo qunyar ah. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee kiciyaasha korantada waa xasilloonida sare iyo riixitaan joogto ah oo dadka isticmaala ay codsan karaan. Ugu badnaan t ...
Sifooyinka aaladaha foojarka ah
1. Been abuur: Waa hab farsameyn loo adeegsado makiinado been abuur ah si loogu cadaadiyo meelaha banaan ee birta ah si ay u soo saarto cilad caag ah si ay u hesho cafisyo leh astaamo farsamo oo gaar ah, qaabab iyo cabbirro qaarkood. 2. Mid ka mid ah labada qaybood ee waaweyn ee foojarka. Iyada oo been abuur ah, sida loo tuuray ...
Astaamaha tuubbada tuubada
Fallaaradihii wax lagu shubi lahaa ayaa ah fureyaal lagu sameeyo shubay. Guud ahaan, qiimeynta cadaadiska ee tuubada tuubada ayaa xoogaa hooseeya (sida PN16, PN25, PN40, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa cadaadis sare leh, oo gaari kara 1500Lb, 2500Lb), badankoodna qalabkoodu wuxuu ka sarreeyaa DN50. Foolal been abuur ah ayaa la been abuuray oo guud ahaan waa ...
Dufcad Baaxad Weyn oo Albaabka loo yaqaan 'Valve Gate Valve' oo diyaar u ah Shixnad
Fallaariyeyaasha albaabka birta ee baaxadda weyn ayaa diyaar u ah rar. Waxay qaadan doontaa tareenka Shiinaha iyo Yurub ilaa Yurub. Baaxadda weyn ee loo yaqaan 'Cast Iron Gate Valve' waxaa si ballaaran loo isticmaalaa khadka ugu muhiimsan ee biyo-soo-saarka, warshadaha biyaha, biyo-gelinta iyo bullaacadaha, daaweynta biyaha qashinka, nidaamka biyo-gelinta magaalooyinka. Bir fadhida wi ...
Rakibida goomayaasha waalka
Si loo hubiyo qufulka nidaamka tuubada waalka, marka lagu daro xulashada qalabka wax lagu xiro ee ku habboon, sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo goomaha sida saxda ah ee soo socota: Goomaatada waa in la dhigaa bartamaha flange, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah garabka jajabyada; si loo hubiyo ...
Waxqabadka iyo astaamaha qalabka xakamaynta socodka
Waxaa lagu rakibay barta mashiinka biyaha, LH45-16 taxanaha xakamaynta qulqulka ayaa inta badan loo isticmaalaa nidaam meesha bambooyin badan ay kuxiranyihiin isla barbarro iyo tirada unugyada loo badalayo sixitaanka socodka. Ka ciyaar doorka xaddidaadda qulqulka bamka iyo xasilinta madaxa. D ...
Wadada hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee warshadaha waalka, xakamaynta waalka
Iyada oo si dhakhso leh oo dhaqso ah casriyeyn iyo warshadeyn loogu sameynayo dalkeenna, warshadaha waalka ayaa sidoo kale si joogto ah u kobcaya, iyo goobaha dalabku aad ayey u sii ballaaranayaan. Soo saarida warshado badan, filtarka waa qalab warshadeed oo lama huraan ah. Kulul ...